FAQ's - RUBPAGE // Muviri Rubha / NuRu Eotic Massage
Muviri kwiza uye Nuru Massage mhinduro
Izvi zvinoshanda sei?
Nuru massage iri kungotanga kuwana mukurumbira. Madhongi mashoma apfuura, New York City yaisatomboziva nezve iyi nzira inoshamisa. Isu tinofara uye tinodada nekuve vekutanga kamwe kupa yakakosha-mhando eotic erotic massage muManhattan neNYC nzvimbo. Hatikwanise kunonoka kuita vatengi vedu kufambidzana neiyi nzira inonakidza. Pamasalon edu, isu tinoshandisa chete -yese rudzikunuro rwakagadzirwa kubva kune yakasviba uye yakati sandara Nuru gungwa mabwegi kugadzira inonakidza inonzwa kunzwa iwe yausati wamboona kare. Verenga zvimwe… Yedu yakanaka masseuse inodziisa iyo gel kumusoro uye yotanga kukwiza muviri wako wemukati kubva kumusoro kusvika kumagunwe. Paunenge wakafukidzwa zvakakwana ne Nuru, anotsvedza muviri wake pamusoro pako kuti ape muviri-kune-muviri kukwiza muviri kwausingazombofa wakaregeredza. Paunenge uchinakidzwa nekuzorora panyama, muviri wako unowana purofiti kubva mukuchenesa uye kubvisa zvinhu zvinopihwa negungwa. Kunze kwekuwana iyo isingakanganwike masaji, iwe unogashira yakakwana herbarium kurapwa kwemuviri kunovaka ganda rako uye kurisiya rakatsetseka uye richivandudzwa. Mazhinji evatengi vedu anoshamisika neiyi yekuwedzera bhenefiti yemasaji. Kurapa kweganda kunovaka pamwe chete nekunzwa kutsva uye kunozorodza kunoita kuti kukwiza muviri ive yeedu akakurumbira uye anodikanwa ekurapa paseti. Mumaawa mashoma chete, iwe unogona kutanga kunakidzwa nekuwedzera kwemufaro usingaenzanisike. Bvumira muviri wako kuti uve unogamuchira rubatsiro rwekare kurapwa. Iwe unonzwa kupisa chaiko kubva pane alarm. NEW YORK MASSAGE FULL SERVICE Kana iwe uchitsvaga imwe yeakanakisa kukwiza muviri muNew York, funga Nuru kukwiza muviri. Nuru anobva kune yakasarudzika nzira yekuJapan yekuratidzira iyo inoshandisa isina kupfeka ukobvu-pa-mubatanidzwa ruzivo kuunza zvinonakidza mhedzisiro. Isu tinofarira kukupa iwe chete maelite marudzi eNuru massage. Nokusarudza uku kurova kwakanyanya, unozvibvumira kunakidzwa nehuzere hwemuviri-kusvika-pachiitiko chiitiko. Iyo yekumasaja inoitwa neyehunyanzvi masseuse, uyo anoshandisa zvese-zvakasikwa massage gel, inoyerera kubva kune isina kunhuhwirira gungwa. Nekudzidzisa edu anodakadza masseuse iwo akakosha matekinoroji, isu tinopa inofadza kwazvo nuru kukanya muManhattan. Sangano rako rinozovhunduka zvinofadza kana iwe uchinzwa kupisa uye kwemanzwiro kukwizwa kunoitwa nenyanzvi. Zvibvumire iwe kutakurwa nesimba rakanaka. Zorora uye uzvirasire iwe mukunzwa. Isu tinofara kufambisa vatengi vedu manzwiro akasiyana siyana nekupa rudzi urwu rwekuvaraidza kwevanhu vakuru pamwe nehunyanzvi hunobatsira hwemuviri wako. Vamwe vevatengi vedu vanotiudza kuti kukwiza uku ndechimwe chezviitiko zvakakosha muhupenyu hwavo. Unonakidzwa nenguva dzisingakanganwiki uri pamwe chete nevasikana vanonakidza uye vane hukasha, avo vaigona hunyanzvi hweNuru Massage muNew Jersey neNew York. Kunzwa kwemuviri wako kunosvika pazvikomo zvisingakanganwiki nepo chakavanzika chehunyanzvi hwekare chichiwedzera chinhu chepfungwa pakunakidzwa kwako nemuviri. Nuru haasi akajairika amator masaja. Inogona kukuunzira mufaro wausina kumbofunga kuti waikwanisa kusangana nawo. Unogamuchirwa kunakirwa neshoko nevasikana vedu vanobva kuNYC. Aya akanaka masseuse anogamuchira yakakosha rovedzo kuti ikupe iwe kunzwa iwe kwausina kumbofungidzira nezvako. Mumakore achangopfuura, uku kukwiza kwange kuri kuwana mukurumbira wakakura nekuda kwemhedzisiro inoshamisa. Paunenge uri erotic massage, Nuru inopa ese mabhenefiti ekurapa massage zvakare. Shandisa mukana iwoyo nhasi uye uchanyatsodzoka tomorn. NURU MASSAGE. EROTIC MASSAGE. Isu tinofara kukugamuchirai, madzimai uye vanababa muparadhiso yeJapanese massage uye nuru massage new york. Nesu une chokwadi chekuwana yakanakisa nuru nyowani york guta pamwe neJapanese percussion novel york. Isu garandii zenith mhando yevakuru yekukwiza nyc, uye tinoramba tichikurukura. Hazvina mhosva kuti uri kupi ny uri mumambokadzi kana chitsuwa chakareba kana kunyangwe mupullover nyowani, tinozorora padhuze newe uye takagadzirira kugutsa zvishuwo zvako zvakasununguka uye zvishuwo zvakavanzika. Bata nzvimbo yedu yekufona uye rekodha yeizere masaji muManhattan izvozvi. Nakidzwa nerotic massage nhasi. Sarudzo yeerotic massage yakagadziridzwa york yatinofanira kupa iri kure chaizvo. Unofanira here kuda japanese massage manhattan kana kusarudza zvirinani bm nesu iwe uchawana yevakuru varaidzo kune yako sarudzo. Nemadzimai edu, tarisa iwo akanakisa masaji mateki iwe uchave uri pamusoro penyika. Fona nhasi uye iwe uchave neshuwa yekudzivirira nuru yekukwiza foni uye yenyama yekukwiza mbozhanhare kune vako vaunofambidzana neramangwana! Japanese Massage NY ndeimwe yeakanyanya akarara echikuru yekukwiza ny kune iyo inopa iyo yekuitisa mafaro, inosimudzira muviri nemweya. Iyi nzira dzekare kana kukwiza nyama kunobva kuAsia uye kunoitwa nevanyengeri vane nudes kunokonzeresa chishuwo uye panguva imwe cheteyo kunopa runyararo nekugara zvakanaka kune vanogara mumusha weyork usingashandiswe vari muhurombo hwawo nematambudziko ezuva nezuva. Tender uye yakashata bodywork inokosheswa nevazhinji vedu vashanyi vakavimbika vanobva kudhorobha pamwe nepakati peguta uye kumusoro. Kunze kweJapanese massage nyc imwe yevakuru yekukwiza manhattan pane inonyanya kudiwa nuru ny. Iyi massage, nuru nyc, ndeye nyama zvekuti inogona kuve kumufaro yekuguma massage nyc. Kana mukadzi akanaka achitsvedza nemuviri wake wakashama wakashama uchipesana newako, mumwe haagone asi kubvuma kune chishuwo chisingadzivisike. Hazvishamise kuti nuru new york ndiyo inotsvakwa kwazvo mu nj. Wakafara kupera shampoo ny yakave yechokwadi? Kunyangwe kana kutandara kwevanhu vakuru muUSA hakusi kwemahara senge muAsia semuenzaniso, munhu anogona kuwana iyo inoshamisa kwazvo kushambadza kwenyama matiri. Kana tikatora york nyowani kuti titsvage yevakuru shampoo nyowani? Kune here imwe yekupuruzira imba muBrooklyn? Kana kufara kunopera kwemassage muBronx? Vazhinji vanoti chakanakisa ndeye mufaro unopera kupera manhattan. Zvisinei hazvo munhu mukuru mutambo manhattan haanyatso kuziva chero muganho. Ita kuti fungidziro yako iende musango, zvibate iwe nenguva yekuzorora pane yakabatikana Nguva mudunhu rezvemari. Nekuuya kusalon kwedu, iwe uine mukana wekunakidzwa neusingakanganwiki zvepanyama chiitiko. Nuru kurovera kwave kuripo kwemazana emakore uye pamusoro pemakore, zvakatowedzera zvirinani. Yedu nyanzvi masseurs anotorwa nemaoko kune yavo yakakura ruzivo uye inonakidza belle. Kunyangwe kana iwe wakamboedza amator massage pamberi, isu tine chokwadi chekuti uchave unoshamisika kana mumwe wevanako vedu akatanga kumuita mashiripiti. Nyore amatory kukwiza haina chekuita neanoshushikana uye akajeka masangano anopihwa nevasikana vedu. Kubva pakubata kwekutanga uye kusvika pakurova kwekupedzisira, iwe unonzwa uri pamusoro penyika. Iko kuzorora kunouya mushure kunogona kugara kwemazuva. Horo yedu inosvikika kune wese munhu mu NY nenzvimbo. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kutipa runhare uye isu tinongoda kudzokorora kupfupi kugadzirira kushanya kwako. Mutengi wega wega anowana rubatsiro rwakanyanya. Yekare yekuJapan yekumasaja inokumbira yakasarudzika nzira uye yakawanda mabhuku. Kana chikamu chatanga, iwe unobva wakurumidza kunzwa kuti chakasiyana sei nechinhu chipi zvacho chawakamboedza kare. Zvepamoyo, zvinotapira, zvinotapira, zvinoyemurika, uye zvinonakidza anongova mazwi mashoma anotsanangura izvo zvaunoda kusangana nazvo Muchokwadi, vazhinji vevatengi vedu vari mukutambisa account mushure mekumisheni kwapera.
Ndinga shambadza sei muviri wangu rub rub services?
Ndingaite sei kuti nditange neRubPage classifieds yemahara? Sechiratidziro cheyambiro, iwe unofanirwa kugadzira yemahara RubPage account kutanga kushandisa yako yemagetsi tsamba hurukuro uye ipapo unofanirwa kuongorora yako RubPage account. Kuti uone yako RubPage account, tinya pane yekusimbisa link yakatumirwa neRubPage yakasungirwa webhusaiti. Nekukurumidza paunosimbisa nekusimbisa yako RubPage tsananguro, iwe unokwanisa kutanga kutumira ako akasarudzika kushambadzira kwemahara mune ino backpage kutsiva webhusaiti: RubPage classifieds. Kutanga sarudza guta raunoshuvira kushambadza masevhisi ako, wobva wasarudza odha uye sub-chikamu chemasevhisi auri kupa. Zvino iwe unozofanirwa kunyora zita rakanaka uye tsananguro nekutsanangura masevhisi auri kupa. Edza kupa ruzivo rwakawanda sezvingaite maererano nemasevhisi auri kupa akaita senzvimbo chaiyo, mutengo paawa, nhamba yefoni, kero yeemail, nzvimbo yekupedzisira nezvimwe. Zvino rova ​​bhatani rekuratidzira uye kushambadzira kwako kwakatumirwa ipapo muRubPage yakakamurwa webhusaiti. Semushanyi we backpage kutsiva webhusaiti RubPage classifieds, kukonzera account haisi yekusungirwa. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kusarudza nzvimbo kwaunoda kuwana masevhisi auri kutsvaga wobva wasarudza chikamu uye chikamu. Iwe unozobva waratidzwa runyorwa rwezviziviso chikwereti chenzvimbo yako yemuno maererano nemasevhisi awakange uchitaridzika nawo Zvese izvi kushambadzira paRubPage classifieds zvinopinda zvakarongeka zvine mwero kuti iwe usaone chero emanyepo kana spam kushambadzira, chete vatapi chaivo vanobvumidzwa kushambadzira mune ino backpage imwe webhusaiti webhusaiti, RubPage classifieds. Zvino, tsvaga zvakaipisisa kuita izvo zvinokodzera iwe uye kontrakta mupi webasa nekufonera nhamba yekufona yakapihwa papeji rekushambadzira kana kutumira kutumira tsamba yemagetsi kune wekutumira nhume. Vazhinji vevashandisi veRubPage vachapindura kubvunza kwako mukati memaminetsi kana asiri maawa uye kana mitengo uye zvimwe zvinhu zvikaita senge zvine musoro kwauri saka unogona kuenda mberi nekupa masevhisi awanga uchitsvaga.
Kwidziridza yako masaja masevhisi nesu Yedu yakasviba chikuva inounza vatengi kutsvaga muviri kukwiza uye kukwiza kushambadziro kwako. Nhare Yehukama Inogona vatengi vanogona kuona yako ad info, mapikicha, uye kufona kana kutumira mameseji iwe nekukurumidza kubva kunhare yavo kana nhare mbozha. Iwe unogona zvakare kugadzirisa shambadziro yako nemitsva nyowani mifananidzo yakananga kubva kufoni yako. Anodhura Ads Kugadzira kushambadzira kunotyisidzirwa pamitengo yakaderera inokwikwidza zvikuru. Iwe une sarudzo yekutenga kukwidziridzwa kuti uone kuti kushambadzira kwako kunoonekwa. Ad Ad Management Isu tinokupa iwe izere kutonga kweako kushambadzira neyakajairika pani yekugadzirisa yako bodyrub kana kukwiza kushambadza uye kubatanidza / kubvisa mapikicha chero iwe paunonzwa kunge ungadaro. Iwe unogona zvakare nyore kuisa shambadziro yako kana iwe usisiri kuda kunyoreswa. Vaka yako Mukurumbira Positive ongororo chishandiso chekushandisa. Kurudzira vatengi vako kuti vape wongororo kwauri, uye iwe unogona kukwira pamusoro pevamwe vese kuti uvandudze yako yepasi yakaiswa. Isu hatibvumidze chero vituperate, mutauro unotsoropodza, kana ruzivo rwemunhu muongororo, saka zvakavanzika zvako zvakachengeteka. Sarudza Guta Rako Ona Traffic Yedu
Nhare Yehukama Inogona vatengi vanogona kutarisa yako info info, mapikicha, uye kufona kana kukutumira mameseji zvakananga kubva kunhare yavo kana nhare mbozha. Iwe unogona zvakare kugadzirisa shambadziro yako nemitsva nyowani mifananidzo yakananga kubva kufoni yako. Anodhura Ads Kugadzira kushambadzira kunopihwa nemutengo wakaderera unokwikwidza zvakanyanya. Iwe une sarudzo yekutenga kukwidziridzwa kuti uone kuti kushambadzira kwako kunoonekwa. Ad Management Isu tinokupa iwe izere kutonga kweako kushambadzira neyakajairika pani yekugadzirisa yako bodyrub kana masaja kushambadza uye wedzera / bvisa mapikicha pese paunonzwa kuti zvimwe ndizvo. Iwe unogona zvakare nyore kubvisa kushambadza kwako kana iwe usisiri kuda kuverengerwa. Vaka yako Mukurumbira Positive ongororo ndeye hangman yekushambadzira popu. Kurudzira vatengi vako kuti vape ongororo kwauri, uye iwe unogona kukwira pamusoro pevamwe vese kuti uvandudze rako repazasi mutsara. Isu hatibvumidze chero kushungurudzwa, kupika mhiko, kana inofamba info mune wongororo, saka chakavanzika chako chakachengeteka.
Ko kana mumwe munhu akandikumbira kuti ndivabhadhare kare pafoni?
Ndapota usava nyajambwa wekubiridzirwa. Usambofa wakaendesa chero mari kunyangwe iri "kubata musangano wako". Ndokumbira utaure kushambadzira kwakadai kune vedu vatengi.
Yakawanda zvakadii erotic massage inofanirwa kudhura paavhareji?
Nuru Massage & Spa muBodyrub nuru massage chikamu chekutambisa kwetsika. iyo yakatanga muJapan. iko kushambadza kunoshandisa kuzodza muviri wake wese, kukwiza. mamiriro emutengi zvakanyanya mumuviri, kubatana kwakazowanikwa mune yechinyakare kurapa kurapa. Kana hurukuro "Nuru" kuenderana kune kukwiza muviri steamer kubva kuzwi reJapan rekutsvedza. nei vese mutengi, uye iyo masseuse ichiongororwa munuru percussion gel nemafuta. Kana iro gel nemafuta zvichiratidzika-zvishoma, zvisina kunhuwa uye chaizvo zvakagadzirwa neasori noriweweed! Chaizvoizvo, iyo Nuru masaji i "nyama" yemuviri izere nemasaji yemuviri inoitwa neese ari "kupa" uye "fenzi" kusasimira, uye "mupi" aramu nekushandisa chiyero chakakodzera cheiyi yakakosha Nuru gel, kana mafuta kwese pamusoro pe "anogamuchira" munhu uye kuenderera mberi nesipo nenzira imwecheteyo senzira izere muviri kukwiza muviri, uyezve inosimudzira kusvika padanho rekuti "mupi" anotanga kutenderedza muviri wavo, uye kugona kugona pamusoro peiyo "vanogamuchira" huwandu kukwiza muviri, uye kubva ipapo, zvakanaka kusvika kune "mupi" kuti azvipedze mushure menguva yakatarwa yave kusvika, kana pane chero nzvimbo inoteerera iyo "anogamuchira" agutsikana uye achifara kupedzisa. Mune salon yekutengesa, "mupi" ndiye anonyanya kushandira, hapana kuchinjana kwemabasa, zvisinei mune mamwe mamiriro, uye kunyanya mune zvakavanzika mamiriro, iyo Nuru Massage inogona kunyanya kusagadzikana mukuti mabasa anogona kudzoserwa nekubatana congeniality, uye aya mabasa shanduko inogona kuve chishandiso kana kudzoserwa, panguva yakawiriranwa nguva yenguva panguva yekukwiza muviri. Hauna chokwadi, kazhinji usina mbatya uku mukadzi achikukwiza nemuviri wake wese, uchikwiza nekubvisa kubudikidza neyako. Izvi zvinoitika nekuda kweiyo yakasarudzika, Nuru gel rinoshandiswa kune mese muri vaviri. Iyo masseuse inozovhenekesa muviri wayo uchipenya pamusoro pako, ichikonzera yakasarudzika taraini yekunzwa iyo inomutsa zvinoshamisa. Maminitsi ese ekushambadza anova nekuwedzera kunakidza. Kuburitsa ne gel Nuru kwakanyanya kusimba pane kukwiza muviri nemafuta akakosha. Uchishandisa iyo izere mubatanidzwa kurerutsa, kutora kumanikidza kure kunogona kukutungamira kune yakasarudzika nhanho yekugutsikana. Chokwadi, mbiri kazhinji kazhinji pasina hukuru hwembatya kushandira pamwe, kushandisa gel Nuru iyo inotsvedza chaizvo inogona kukonzera kunakidzwa kwakanyanya. Nuru massage uye yakafanana Soapy masaja inozivikanwa kwazvo uye inodiwa nevashanyi muBangkok. GADZIRA Sarudza chinobatsira Nuru Massage Erotic Massage Sensual Massage Massage Massage Yakazara Muviri KuMuviri Massage Anofara Kupedza Massage Mukadzi kune Murume Massage Yakadzika Tissue Massage Lomi Lomi Massage Aroma Therapy Massage Thai Massage Sports Massage Couples Massage Hot Hot Massage Sweden Massage Yakazara Muviri Massage Shiatsu Massage therapy Balinese massage Male to Male Massage Zvimwe
Iyo Hottest Nuru Massage Las Vegas Escorts Nakidzwa A NURU Massage Yakapihwa Las Vegas's Finest Mikana ndipo paunotaura nezve "inzwi" rinodakadza kune mumwe munhu, ivo vachanyemwerera uye kufungisisa nezve zororo ravachafarira neichi chishamiso chinyadzo. Sanganisa kukwiza muviri nezuva rakasviba, uye uchave nemufaro wakazara. Vaperekedzi vedu vane ruzivo rwekupa mameseji ezviratidzo zvese kune vatengi vanokodzera kusangana kwakazara-kuzadza kwavasingakanganwe. Kunyangwe iwe uri wekutanga-nguva mutengi kana wakarongedzwa VIP, kufamba kwedu kwakagadzirira kukuratidza iwe kuti yakawanda sei inonakidza masaja anogona kuva. Chii chinonzi NURU Massage? Kana iwe wakazvifunga iwe pachako, "kupi kwandingawane iyo NURU masaja padhuze neni", wauya kurudyi nzvimbo! Vedu vekunaka veLas Vegas vanoziva kukosha kwakaita kuti vatengi vavo vanzwe kugutsikana mushure mekuitwa kwemasaji. Nepo kukwikwidza kusingaitwe kuchinyatso zorora, kurangana kweNURU kunoenda zvishoma kupfuura izvo kana zvasvika pakunzwa kwauchasangana nako. Paunogovana Las Vegas NURU masaji neanoperekedza, imi mose muchabvisa zvisina kana nebasa zvachose. Anoperekedza anoshandisa chizoro chakapusa kuzora muviri wako. Zvino, pachinzvimbo chekungopfekedza minwe yake kune mhasuru Petrie, anozogadzirisa muviri wake kuti akupe kurudziro yemhasuru. Maitiro ese ari erotic uye anonyanya kufadza. Chii Chinoitika Panguva YeLas Vegas Tantric Massage? Kuti muoni ave nechokwadi chekufadza ficha yako, funga kuyedza Las Vegas Tantra masaji nemumwe weanoperekedza vedu mune kutonga kwako ramangwana. Tantra masaja chiitiko chinokwezva uko pikisheni yako yeateki inowanzo kune ako ekutanga erogenous matunhu mumuviri wako. Nepo aya mabhendi akatarisana, iko kukwizwa kunoitwa zvishoma nezvishoma uye nekuvaka kwekutarisira zvimwe. Yako seksikäs masseuse inogona kutanga kutora kune chimwe chikamu cheuwandu, asi kwete kuendesa kune vamwe ipapo ipapo. Nekutarisa pane imwe erogenous zone, manzwiro ako anomhanya zvisingaite. Paanotamira kune imwe nzvimbo, yako yakavakirwa simba ichafashukira, uye iwe unonzwa kugutsikana kuzere. Las Vegas Tantra massage inoitwawo apo mapato ese ari maviri akashama kuti uwedzere mufaro wako wese. Ini Ndinogadzirira Sei An Asian Massage MuLas Vegas? Iwe unogona kunge wakanzwa kuti kuwana masaja eAsia muLas Vegas ndeyechokwadi mhedzisiro kana uchizohaya mumwe munhu kuti akwese massage iwe zvachose. Vakadzi vedu veAsia vanoratidzira uye nehunyanzvi matarenda avo ekuti vatenge vatengi vedu vane masaja zviitiko zvavasingazombokanganwa. Kupuruzira kweAsia kwakatosiyana pane zvechinyakare sezvo paine zano rinoshandiswa kukurudzira muviri uye kuregedza mhasuru panguva imwe chete. Varume vazhinji vanopika kuti kubhadhara an Asian masseuse ndiyo nzira yekuenda kana iwe uchinyatsoda kunzwa kuzadzikiswa mushure mekunge chikamu chako chapera. Kuverengera yako wega massage, zvese zvaunoda kuti uite kuongorora kune edu aripo ekuperekedza, verenga kuburikidza nemaprofile avo, tarisa mafoto avo, uye utipe runhare kana titumire iwo mameseji nekuwanika kwako. Isu tinotumira yako chaiyo yekuperekedza kwauri kuti ikupe iwe yeAsia masaja mukunyaradza kwehotera yako kamuri kana imba. Yakawanda Sei Inotora Las Vegas Nude Massage Mari? Kana zvasvika pakuregererwa kweLas Vegas kushama kushama, mitengo ichave variegate kuvimba panguva yaunokumbira chikamu chako. Vatiperekedzi vedu vanowanikwa kwemazuva anogara kwenguva shoma seawa kana yakakura seusiku. Nekuda kwekusiyana kwezvikumbiro zvenguva, mitengo inopihwa kwauri mumwaka waunoverenga musangano wako. Mumwe nemumwe wedu wevakadzi anewo musiyano wemitengo zvichienderana nenguva yavo nekambani uye nezvakawanda zvinodiwa. Iwe uchaona, zvisinei, kuti kuwana masaji kubva kune mumwe wedu wakanaka kuperekedza kwakakodzera mutengo unobatanidzwa. Isu tinoda kuti mubhadharo unopihwa pamberi kuitira masevhisi kuti uve nechokwadi chekuti yako masseuse yakachengeterwa iyo yakazara nguva yaunoda. Ndinogona Kusarudza Ndiani Anondipa Muviri Rubs MuLas Vegas? Iwe unogara uine vamp chiito kana zvasvika pakutaurwa kweako wega masaja muimbi. Kunyangwe iwe uchishomeka kuyedza tantra, NURU, kana kungova neyechinyakare masaji kubva kune horny mukadzi, iwe uchazoda mumwe munhu waunowana achikwezva kuti aite rukudzo. Tine sarudzo yakakura kudaro yekusarudza kubva, unogona kunetseka kunongedza mukadzi akasarudzika. Tora nguva yako utarise kuburikidza nemaprofiles atinopa pano pane yedu saiti. Verenga kuburikidza neruzivo uye tarisa kumafoto kusvikira iwe wawana yemasaji Artist iyo piques yako kufarira. Zvese zvaunoda kuti uite kuti utore muviri muLas Vegas kubva kumukadzi uyu kufona kana SMS kuti uzive kuwanikwa kwake.
Nuru massage iri pamutemo muUnited States?
Kugamuchirwa kuVanilla tantric massage London agency. Masseuse anovhara Nuru achikanya London, Erotic massage London uye Sensual massage London. Isu tave tichishanda kwemakore mazhinji ikozvino, nehuzhinji hwevanhu vane hunyanzvi hwekuita zvehupombwe. Vazhinji vevasikana vatinomiririra muLondon vane hunyanzvi hwekurapa masaji, pamwe neruzivo rwekutambisa mune hunyanzvi hweTantra. Tantric percussion muLondon Kune akawanda masitayera akasarudzika ekushambadza kwenyama, asi zvine nharo ndidzo dzinonyanya kutaurwa kune yedu Tantric shambuu muLondon. Dzese idzi dzinowanikwa kubva kune vane tarenda vakadzi vadiki kuVanilla tantric massage. Ivo vanoda imwe hunyanzvi, asi ichi ndicho chinhu icho masseuse edu akagadzira nekufamba kwenguva. Paunenge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge Iyo yakagadzirirwa kwete chete kukufadza iwe uye nekupa kumagumo, uye isingadzivisike bonde rinozorodza iro tantric masevhisi anozivikanwa nekuda kwayo, asi zvakare ichaita kuti iwe ugare wakasununguka kusununguka, kubvisa chero kushushikana uye kusimba uye kukubvumidza iwe kuti upinde mune inofadza, chimwe chinhu chisingakwanise mamiriro emweya. zvepfungwa. Vatengi vedu vanosiya kunzwa kurunyararo uye kwakaringana nzvimbo nepasi uye zvirokwazvo ivo pachavo. inomiririra kuzere uye kutanga mune zvakavanzika zvebonde hazvina kusanganisa kucheneswa pamweya nekukwira. Nuru achipuruzira dare reLondon muviri wese, kwete chete nzvimbo dzinopisa uye nhengo dzepabonde, zvinomiririrwa zvinonzi Lingham ("cutlass of light" kana "boka remwaranzi" muSanskrit) uye Yoni ("nzvimbo isingapindike"). Iyo Nuru massage London chimwe chinhu chinowanzo kuteedzerwa nevashoma varapi vekunakidzwa kwenyama muLondon, uye zvinongova chaizvo kana iwe uchinge wawana kurapwa kwechokwadi iwe kwaunogona kutaura mutsauko. Nuru massage London nzvimbo yakatenderedza lubricant iyo yakanyatsogadzirirwa iyi mhando yemasaji - Nuru gel. Kana isiri Nuru gel, haisi Nuru massage London zvakanyanya. Ichi ndicho chimwe chezvinhu zvinotsvedza pasi rose, uye chinoshanda zvisina mhosva nemuviri wedu wenyama kukanya muviri.Erotic massage LondonMabhenefiti eErotic massage London ese ari epanyama uye epfungwa kana akachena. Zvirokwazvo, kushanda kweEotic erotic London kunotsamira zvakanyanya pane chiitiko chedu vane hunyanzvi hwekuita zvehupombwe. Irotic massage London inogona kunzi kutamba kwepilfer paganda remumwe wako. Ndicho chikamu chakakura kwazvo chemuviri uye chinogona kuburitsa mafaro akasimba. Chekutanga pane zvese, iwe unoda mafuta ekuzora kana ekuzora. Kugara uchikwiza LondonSensual massage London inosanganisira kusanganiswa kwekubata kwerudo kunonyaradza zvese chinhu uye kuonga, panguva imwechete, kumutsa simba rehupenyu rinozivikanwa sesimba pabonde. Izvi zvinonakidza zvebonde simba kuburikidza nehutachiona hweLondon inogara ichinonoka uye nguva imwe neimwe inotungamirwa nekuziva. Nei yakashongedzwa uye ichiziva? Nekuti zvinonakidza zvishoma nezvishoma zvinokonzeresa kuti zvishuwo zvinogona kuve shanduko kuita simba rakakura uye nekudaro, zvine hungwaru zvinotungamirwa neuyo anopa yakasviba kukwiza London muhupenyu hwese hweanenge arwadzwa. Nekudaro, kuve neyako yekuwedzera, euphoria, kuzadzikiswa pasina chinhu zvinosvika zviri nyore.Yedu erootic massage London masevhisiIyo huwandu hweerotic massage London inowanikwa inoshandurwa chaizvo chaizvo. Heano mamwe mashoma esarudzo dzakachena vatengi vedu vanoita. Unogona kuwana zvakawanda nezveumwe neumwe wavo paunenge uchifamba padandemutande redu, asi kana uine chero mibvunzo, ndapota signior't unonetsekana nekutibata nesu nemibvunzo yako. ndiwo "staple" kusarudzwa kwenyama yekumakwiza pachibairo kuVanilla, zvakakosha kutaura kuti mumwe nemumwe wevasikana vanoshanda nesu, vese vane yavo yakasarudzika masitaira. Tantric stroking nemumwe wevasikana kuVanilla inogona kunge yakatosiyana neimwe. Ivo vanga vari echinyakare tantric masaja kwemakore mazhinji uye vane yavo yavo masitayera, chete kuitira kuti vape yakanakisa sevhisi yavanogona. Zvinokurudzirwa kwazvo kuti iwe uedze vasikana vanoverengeka vakasiyana pakudzokorora kubhuka, kuti uwane yaunofarira. Tine chivimbo chekuti izvi hazvizove nyore kutsunga kuita, zvisinei! Yedu London tantric masaja vasikanaVasikana vanobva kunzvimbo dzakasiyana kure, uye zvirokwazvo vanobva kumativi ese epasi. Ivo vakagara pano muLondon nekuti ivo vanonzwira hunyanzvi hwevanhu vepasi rose varipo pano, uye vanofarira huwandu hwevanoshingairira nyama yemasaji vatengi varipo. Ivo vese vane hushamwari uye vari nyore kutaura navo, saka kana iwe uchikwanisa kuve nekufunganya zvishoma, ivo vanove nechokwadi chekukuisa iwe kugadzikana, muchokwadi, kana isu tichibvuma kumiririra imwe yeaya masseuse kuVanilla, tinoda kukonzera kutadza kuti ivo vanodakadza hunhu hwavo sezvavari pakuonekwa kwavo. Izvo zvakakosha zvakanyanya kuve nekukwidziridzwa kwepanyama nemukadzi akanaka, zvese zvinowedzera mukunakidzwa kwese kwechiitiko. Asi kana asina kugadzirira kutaura uye kuve nehushamwari newe usati watanga meseji yako, haasi kuzoshanda. Yako tantric stroking London inofanirwa kuve chiitiko chausingazombokanganwa. Ichi ndicho chinangwa chedu, saka kusarudzwa kwedu kwevasikana kunofanirwa kuve kwakakwana. Ivo vese vanofanirwa kuve nehunyanzvi hunodiwa futi, chokwadika, izvo zvinopinda pasina adage. Ivo vese vanoziva tantric, Nuru uye huwandu kune masevhisi emuviri, pakati pevamwe vazhinji. Uye rangarira, sezvatinoverenga pakutanga, mumwe nemumwe wevasikana anopa maitiro akatosiyana.Yedu tantric shampoo nenzvimbo dzeLondonTantric Massage ChelseaTantric massage Gloucester RoadTantric Massage MayfairTantric Massage South KensingtonTantric Massage PaddingtonTantric Massage KnightsbridgeTantric Massage Edgware Road Tantric Massage Maserari Maserari Baker Street Massage Victoria Tantric Massage Notting HillTantric Massage Chelsea Bridge WharIncall uye kuridza London masevhisi masevhisiVasikana vakasarudzwa kuti vape yako amator massage vese vanoiswa munzvimbo dzakasiyana siyana dzakatenderedza London. Izvi zvinodaro nekuti ivo vanoitisa yavo yega masseuse mabhizinesi kubva kudzimba dzavo. Ivo vese vane dzimba dzakasununguka uye dzakangwara dziri nyore kuwana. Ivo vane yakazara yekugezesa zvivakwa zvekushandisa iwe, usati uye shure kwako tantric masaji, uye ivo vanopfuura kupfuura anovimbisa kukupa iwe zororo zvakare. Yako masseuse yakakumikidzwa kune yako kuzorora kwenguva yako yekubhuka Kana iwe uchida kunonoka mukunyaradzwa kwemba yako kana hotera, isu tiri vanopfuura mufaro kutumira mumwe wedu wemasseuse kunzvimbo yako. Kunze kwekuti iwe uri kure kwete kure, uye iwe uri muCentral London.
Kuverenga Kwezwi: 1166
Ndeupi musiyano uripo pakati pezvikamu zviri pawebhusaiti?
Tantric masaja Kubva pakurova kuenda kune sagacious maitiro. Tantric massage inodzorera kusimudza kwako, inonyaradza, inoderedza kusagadzikana. Kufungisisa mimhanzi, hwema nemakenduru zvakanyatsokunyudza iwe mukuita kwehukama. Inomutsa masimba emukati uye inovaendesa kuzvinangwa zvekunze uye zvemukati. Massage isati yasvika, iwe unenge waraswa munyu kana shuga uchichekerera muhamamu, kuitira kuti muviri wako utaridzike kubva kune ese masimba masosi eminda, kudziisa matombo uyezve wozoenda kumashiripiti kukwiza. Pakati pemhando dzakasiyana dzehunyanzvi hwekusimbisa - kunyanya vakadzi erotic masaja inomira kunze nekuda kwekugona kwayo uye yakakosha simba kuchinjana pakati pechirume kurapa murapi uye hure. Muzvinabhizimusi masseur anotanga kuita akazara ekuzorora massage, uyezve erootic (tantric massage). Tantric massage NYCTIzviitiko ndezvekuti chinangwa chekushusha tantric muNY ndiko kuburitswa kwehukama hwepabonde, hunhu uye kuwedzera kwekunzwa, kukurudzira kwekuviga kuseri kwekusangana pabonde uye kuonekwa kwenzvimbo dzaisazivikanwa dzinotyisa mumuviri kune yakajeka uye yakasununguka orgasm Tantric masaja mu NYC inzira inoshamisa yekuratidzwa kwako kwepfungwa uye kuzvidzikamisa kuburikidza neruzivo rweumwe neumwe, kuburikidza nehukama hwepanyama, hwekunzwa uye hwechechi. Hwaro hweruzivo rwe tantric masaja New York - hutachiona, nekuti iri kuburikidza nekubata kuchinjana kwesimba. Tantric masaja eBrooklyn Tantric masaja muBrooklyn rudzi rwekuzorodza, panguva iyo mutengi anovimbiswa kwete kungonakidzwa chete, asiwo kupora.Achapa mufaro kune avo vanoda kuyedza zvakanyanya, asi nemanzwiro mamwe chete, ayo achateverwa Kusangana kwekutsvoda uye kubata kwehukama hwemuviri usina kupfeka weye nymph yakaisvonaka, kuravira kweshuga kwekutsvoda kuchakuzarurira iwe zvese zvinofadza zvehupenyu hweparadhiso. Uku kukwiza kunovandudza pakutapurirana kweropa mumhasuru neganda, kubatsira kudzorera kuyaruka uye simbisa hutano. Mushure mekugara, iwe unonzwa zvakanyanya kugadzirisa. Tantric percussion inokutora iwe kuenda kune iyo nyika yeisingaite, zvechokwadi zvinonakidza zviitiko, kuti uwane kurohwa kwemufaro. Tantric massage muManhattan itsika inoitwa nevari kutora chikamu vari vaviri. Pamatanho ekutanga ekuvandudzwa kwekutaurirana pane mukana wekunzwa simba repabonde, kuti unzwe iwo chaiwo mazano ekutanga pamusoro pekunakidzwa chaiko.Kana tichitaura nezvehunyanzvi hwekukanya, saka hapana akateedzana mapoinzi mairi. Iyi nzira inobvumira varume uye vakadzi kuti vapone pamamiriro ezvinhu anotevera: Zororo, Kuregererwa kubva pane zvisina kunaka manzwiro, Kudzoreredza uye kupora kwemuviri, Kudzoreredza uye kupora kwemuviri.Tantra inosimbisa hukama pakati pevamwe, ichivasimudzira nhanho yepamusoro. Kudzidzira kukwiza kwakadai, unogona kugadzira yako yekunyepedzera manomano ayo anounza mufaro uye kupenya zvaunofarira iwe neako mudiwa! Edza kutsiva sitiroko, kurira, kurova maoko uye kukwiza. Mwaya muviri wemumwe wako nechiedza, kutsvoda kusinganzwisisike, kwiza pachipfuva chake kana kumagaro. Tantric massage midtown A ine hunyanzvi kukwiza muviri kunobatsira kubatanidza mamiriro evaviri. Zvinochenjera kuti iko iko iko kwemoyo wesimba unotsanangurwa mumagwaro eTaoist neTantric, nenzvimbo dzinotyisa dzinoratidzwa nevasayendisiti vekuMadokero-vezvepabonde, kazhinji zvinowirirana.Tantric masaja mukati meguta ndiyo imwe yenzira dzakanakisa dzekufunda maficha enzvimbo dzinotyisa. Massage tantric Midtown, kunge caresses mumutambo werudo, inofanirwa kuve inowirirana. Zvinokurudzirwa kupa nzvimbo uko manzwiro ari kunyanya jocose, nerubatsiro rwekuenzanirana ruzha rumwe chete, kuti usagogodza tambo uye udonhedze mhedzisiro. MuMabvazuva, zvanza nemakumbo zvinoonekwa sema microcosms emuviri. Tsoka dzakanyanya kuda masaja kupfuura mapendeti, nekuti zuva rese dzakasungwa zvakasimba mushangu uye hazviwanzo kusangana nenzvimbo dzepanyama - pasi, jecha neuswa. Tantric stroking Queens Kuburikidza nemaitiro ekuzorora kwetantric, vasikana veQueens vanofambisa magadzirirwo etsinga dzese mumuviri wese, kuburikidza nekubata nyore, kubata uye kurova. Kufuridzira pamasimba emagetsi uye kutandara kwekuguma kwesimba kuchakusanganisira iwe mune isingakanganwike kunzwa kwekufara. Mushure memasangano ekutanga, unobva wawedzera kusununguka, kuva nechivimbo mukati mako, kuregeredza helter-skelter huta hwekuwedzeredza, kushushikana uye kuneta kusingaperi. Kwatiri, iwe pinda mumaoko akavimbika uye akapfava mairi izvo zvingave zvinodikanwa kuti udzokere uchidzokazve.Musiyano uripo pakati pekuzorora kwetantric pakati pedu nemhando dzayo dzekutengesa ndezvekuti pano mukuru anogona kuwana rakakura kwazvo renji dzekunzwa, nekuti pano hapana miganho uye kuvharira pane zvinotenderwa. Vasikana zvine rudo uye zvakashata zvakanakira kuchengetwa kune yese sero yemuviri wako. Zvibvumire iwe pachako chinangwa, kuvhurika kune isingakanganwike mafaro. Tantric masaja nyowani Tantric masaja muNew Jersey senge chero imwe mhando yekukwiza, inomutsa kutenderera kweropa, inovandudza zvazvino zvemuviri, metabolism, inoderedza kushushikana kwemhasuru uye inokanganisa iwo akakosha mapoinzi uye nzvimbo dzemuviri wedu dzakabatana nenhengo dzemukati. Kumutsa simba repabonde, tantric masaja inokupa iwe mukana wekuti usimbise rudo rwako nechidakadaka, kubvisa zvivara zvepabonde uye kutya, zvinokubatsira iwe kudzidza kufunga neako inspirit, dzidza kuonga nekukoshesa nguva dzese dzekunakidzwa. Shanduko yesimba repabonde kuburikidza nekufungisisa ndiyo pfungwa yakakosha ye tantra, saka ndiko kumuka kweichi chiito, kubviswa kwayo uye shanduko yayo yakanangidzirwa kune tantric massage muNJ. Tantric kukwiza mudhorobha Kubva yakare seti TANTRIC MASSAGE inozivikanwa senzira yekurapa, musangano unokwanisa kupora kumunhu simba nehudiki. Zvemashiripiti ekubata zvine mikana yakawanda yekuvandudza kwete chete mamiriro epanyama, asiwo emanzwiro. Kubatana kwemubatanidzwa kunokutendera kuti uzvisunungure kubva pakuramba zvisina basa, izvo nekuda kwekumhanya kwemazuva ano kwehupenyu kunowanikwa mune wese munhu. Kubva pane tantric poindi yekutarisira, kukwiza kubata kunokonzeresa kwakagadzirirwa kupa mufaro kune vese vatori vechikamu chiito, kufadza tsinga dzese uye kuzadza nemufaro. Iwo mutauro usina mazwi, uchipa nguva dzekunzwira tsitsi, uchitungamira kune usiri-izvo, zvichikubvumidza iwe kuenzanisa parutivi rwakanaka rweicho chaicho uye chisiri chechokwadi. Tantric masajiRudzi urwu rwekurapa kwese kwese kwakasarudzika, mashandiro emuviri pamwe nawo anokunda kunze nerubatsiro rwekubata zvinyoro uye kutsvoda. Maitiro echinyakare kana uchiita hunyanzvi nemasseur haushande Maitiro ekukwiza muviri anoitika pasi pekunonoka kuzorora mimhanzi, inogona kuitwa nemunhu mumwe kana akati wandei. Iko hakuna chaiyo nhungamiro uye chishandiso chekumisikidza kwechikamu, pamwe neakakodzera matekiniki ekuita kwayo. Tantric massage yakasarudzika zvakasiyana kubva kune chimwe chiratidzo chekukwiza muviri. Chinangwa chake ndechekuzorora uye kunanga iwo simba kune inozorodza uye yakakwana kuchenesa kwemuviri, pfungwa nemweya. Mhedzisiro yacho ndeyekuzorora uye kusimbisa kweganda, suka iyo thew uye nhengo chaidzo. Usati waenda kune tantric massage musangano, tsvaga kwakanyanya kuderera kunobata maitiro aya. Ukasadaro, unogona kushamisika (zvese zvinofadza uye zvisingafadzi). Kuburitsa kunoitwa mune yakaderera mwenje, vese vatori vechikamu vekusimbisa, sekutonga, havana kusimira, murapi wekusimbisa anovavarira kuvhura iro rakavharwa simba, iro rinoungana kunyanya nenzira inonetsa yehupenyu, kana munhu asingazive chero chinhu kunze kweku zvipikirwa. Izvo zvakakosha kuti ubve kure nenyika yekunze uye unzwisise zviri kuitika kwauri panguva ino, nakidzwa nekubata kumeso kwechirapa, kukwizisana kwemafuta anonhuwirira mune zvese zvakavanzika zvemunhu wako. yakangotarisa pakurohwa kwenhengo yekubereka (iyo lingam iri mumurume uye yoni mumukadzi). Chinangwa chechigadzirwa ichi kubhadharisa muviri neHupenyu, kunzwa kunzwa kwekufara uye kurerukirwa, kubvisa kunyadziswa, kuziva pefiyumu, pamwe nekugovana zvinomutsa uye, zvichidaro, kuzadzisa muviri uye pfungwa cum.
Ndeapi nyika nemaguta aunoshandira?
Erotic masaja West West York Erotic massage West New York, Nhare dzevanoshambadza vasina kupfeka muUnited States HAPPY ENDING MASSAGE Pasina hukama hwepedyo, asi… zvinoita sekunge hwapedyo! Kukwiza muviri kunoitwa nemunhu anodikanwa kunounza mabhenefiti mazhinji mukusagadzikana kupfuura kunyangwe kukwiza kwenyanzvi kunoitwa nemunhu webonde rimwe chete, nekuti mune iyi nyaya kumisikidza kwesimba rezvepabonde kunoitika mumuviri wemassage nehova dze orgasmic sensations inomuka munzvimbo yeEotic mameseji kuWest New York nharaunda inosimudzira mhedzisiro yekuita kwemaitiro. Unogona kushandisa zvese zvakashatiswa uye nzira dzinouya mupfungwa. Massage yevakuru. Kudzosera kumashure kune zvemagetsi tsamba.Ndiipi iri muenzaniso wekusimbisa? Ko Kambani Yako Inokwezva Massage West New York Zviri Pamutemo? Isu tinoteerera zvakanyanya kune hunyanzvi hwekushambadza kwechinyakare, kuve nekuzorora kuuraya.Zvose izvi zviri mutambo pakati pevatori vechikamu vaviri vechiitiko ichi, zvinoenderana chete neEotic massage massage West New York pachavo. Tinoda kukubata seshamwari, Erotic massage yekushanya kwakasarudzika kune zvimiro zvichakamirira, asi nenzira yakatendeseka uye ine chisimba. Anofara enging stroking NJ Anofara enging massage NJ anogona kupedzisa Erotic massage West New York yerudzi rwakakura rwehunyanzvi - kumabvazuva, ndiko kuti, Thai kana Indian, Russian, European, asi kwete kudzikiswa kune chero ipi zvayo. nzvimbo padhuze nepamba pake Ini ndaive nechirimo padumbu rangu, zvakadaro. Nemhasuru dzedzvinyiriri iwe haugone kumira pamhemberero, simba rakasimba ravanoda kupfuura kupuruzira zvinyoro. Happy enging kukwiza Brooklyn iri kuyedza kupa sechinhu chisina hunhu, isu takagadzirira kutsigira zvine mutsindo maonero edu! Anofara enging kukwiza juzi nyowani Happy massage ndiyo kutanga kwakanakisa kubva kuNew Jersey.Vakaroora vasingashandise mune zvavo bonde , kuparadza zvakawanda! Kushanya kwangu kwekutanga kwakaenderana nekupera kwehukama hwemakore gumi. Seizvo chero munhu anoda. Erotic percussion West New York, Happy ending massage muWest New York, New Jersey Unogona kushandisa zvese nzira uye nzira dzinouya mupfungwa. Heano mashoma acho:. Iwe uchawana pano yakakwira hasha ichirova mumhepo inonakidza ine yakanaka masseuse. Kutanga Guta State Kodhi Kusangana pabonde Tsvaga fuck Tsvaga dhongi Erotic massage West New York West New York New Jersey US 6246 hongu kwete 07.10.2010 39 hongu hongu LRLL 61 LRLL 26.09.2018 ay LRLL 25 kwete kwete 66
"Shampoo inofara" iko kushambadza kunopedzisa nekubatana kweamator pakati pemutengi uye murapi wekusimbisa. Kazhinji, pane zvinongedzo-kure kuti erotic bhurashi iri pane spa menyu-semuenzaniso, innuendo muzita reiyo spa. Iyo spa menyu zvakare inogona kuve yakanyorwa nenzira yakadaro inoita kunge isipo, senge kurapwa kunoshandisa mazwi akadai se "kwese-kukwiza muviri," "tantric massage," "chidya kukwiza," kana "munhu-kune-muviri kukwiza muviri." Kunyangwe masaji eAsia aine nhoroondo refu yekurapa uye yetsika, izwi rekuti "masaja eAsia" dzimwe nguva rinogona kunge riri kodhi iyo nzvimbo yekutandarira inozadzikisa kukanya. Vanofara Massage Zviri Pamutemo here? MuUnited States, shampoo inofadza haisi pamutemo uye haiitwe kunzvimbo dzepamutemo. Pasi pemutemo, kukwiza kunofadza kunoonekwa sehure. Mazhinji maspas anoita masaja anokwezva ndeyekunze kwechipfambi uye anowanzo kuve munhau dzekukurudzirwa nemapurisa nekuvharwa - chinova chinhu chekuchengetedza mupfungwa kana iwe uchifunga nezve kuva mutengi. Vatengi varipo panguva yekupamba vari panjodzi yekusungwa. Imwe njodzi yekutsvaga masaja inofadza iri kutumirwa kune imwe spa inotarisira kubiridzira vatengi. Dzimwe nguva maspas anozvishambadza ivo vachishandisa mari-yekubata yekusangana pabonde uye nekuraira vatengi mubhadharo wekuti vapinde, mari yekumwa, uye mubhadharo webasa-vasina kumboita zviito zvepabonde. Vazhinji varapi vemasaji vanobatwa vachiita kana kupa masaja anofara effrontery njodzi yekurasikirwa nerezinesi ravo. Iko zvakare kutyora kweye shampoo Therapist maitiro ebhizinesi ekudzikamisa mutengi nenzira inokanganisa, kunyangwe kana kubata kwacho kuri kubvumirana. Kana iwe uchinetseka kana yako masaja Therapist iri kukubata iwe zvisina kukodzera, vimba nemafungiro ako. Icho chinangwa chekubata, kwete nzvimbo yekubata, ndicho chakakosha. Kunyangwe iyo yakadzika-yekushambadza kurapa murapi anogona kuisa maoko ake pasi pepilvic pasi kana imwe nzvimbo yepedyo yemuviri wako panguva yekurapwa, izvi zvinogona kunyatso kurapa. Kazhinji, zvisinei, izvi zvinoitwa chete mushure memasangano mazhinji umo tarisiro inovakwa neyekushambadza murapi. Zvisinei, kana iwe uchinzwa kusagadzikana panguva yekugeza, rega murapi azive nekukasira. Izvo Zvakambokodzera Here Kukumbira Yekufara Massage? Aiwa, hazvina kumbobvira zvakakodzera kukumbira kukwikwidza kunofadza pane chero nzvimbo dzepamutemo dzepamhepo kana panguva yemukati-meseji yekupinda mukati. Hongu, kukwiza muviri kunogona kuita senge kune hunhu kana hunhu - mushure mezvose, wakashama pasi pemachira - asi kutyora kwekutenda nachiremba wako wekusimbisa kukumbira chimwe chinhu chinopfuura chiyero chekurapa kwako. Kukumbira shampoo inofara kunogona kukurevesa iwe kusvika mukunyadziswa uye kupera kwakatemwa kwechikamu. Zvingangodaro, iwe uchasangana nemusina kugadzikana wekurapa murapi uyo anokuudza iwe nezvemiganhu yebasa. Ko Zvakadii nezveMassage Inofadza Mune Dzimwe Nyika? Massage inofadza iri nyore kuwana kune dzimwe nyika, kunyanya muThailand (Bangkok) neIndonesia (Bali). Nekudaro, nekuda kwekuti zviri nyore kuwana, hazvireve kuti zviri pamutemo. Cebu City muPhilippines inozivikanwa nekukwazisa kwayo lingam - iyo inopera nekukwizwa kwe "lingam" - asi kunyangwe iyo mhando yemasaji yakaitwa nhema mu2010. Vanotyora mutemo uyu vanogona kugara mujeri kwegore uye faindi inoita madhora zana. MuBali zviri nyore kuwana mari, shampoo yepamutemo, asi zvakare zvakajairika kupihwa masaji anofara kunyangwe iwe usiri kutsvaga imwe. Chipfambi hachina kutenderwa, kunyange hazvo chichiwanzobvumidzwa muIndonesia, zvisinei, kwemakore mashoma apera, zviremera zveIndonesia zvave kuvharira dzimba dzinopa mameseji anokwezva uye dzimba dzinoshanda pasina marezinesi akakodzera. Thailand inonyatso kuzivikanwa nemasaji avo anofara, dzimwe nguva anonzi akakosha kurova, uye akapararira. Nepo hupfambi husiri pamutemo muThailand, maseru enhengo dzinogona kunyoreswa sebasa repamutemo. Kune mamwe ma Thai Thai salours ayo anopawo mameseji anofadza, asi iyo Federation yeThai Spa Associations yakavhiringidza hurumende kumanikidza iwo marudzi ezvipiriso. Kunyangwe uri kupi iwe pasi, usafunge kuti iwe unogona kuwana amatory kuonana ku spa uye uzive zvingangoitika mhedzisiro kana iwe ukatambira kana kukumbira kusangana neasina .. .. Male vs. Vakadzi Masseuse Akanga ari mukomana wemutsoka akabatsira here? Kutenda nekutidzora isu ziva! Share Pin Email Titaurire nei!
Ruzivo rwangu rwakachengeteka newe here?
Akanaka Zvakanakisisa Nuru masaja muNew York Kutsvaga yakanakisa Nuru massage mamiriro mu NYC? PaNuru Studio, iwe uchasangana nevakadzi vakanaka vanogona kukugadzirira yakasarudzika chikoro chekusimbisa iwe. Iwo masseuse akasununguka kuchinja uye kugadzirisa ako echinyakare eroottinen masaja kuitira kuti iwe uzadzise zviroto zvako. Kana purogiramu yapera chete, iwe unozofunga nezve kwokusvina mune inotevera mukarenda yako. Yedu inoshamisa Nuru slide massage Therapists vanoita zvavanogona kuita masaja inomutsa pfungwa dzako nekuzorodza muviri wako neUpenyu. Kubata zvinyoro nyoro, iyo yekuzorora mamiriro, uye maviri akaumbika mune yenyama ganda kune ganda chiito. Iko hakuna akafanana neayo iwe aunowana kuNuru Studio.
NuruStudio Ongororo "Inoshamisa sevhisi. Kungova nemasaji aNuru naSasha, uye kwainamata zvisingaite. Ndakazorodzwa mushure meizvozvo zvekuti ndakatadza kuyeuka zita rangu. Kukwiza kwakanaka, kukwiza muviri kwakanaka, uye nzvimbo yakanaka: chii chimwe chiripo chekutarisa? ” - Ryan achienda Sasha, NYC "Lucy anoshamisira zvakadaro! Anoshamisa Nuru massage nyanzvi, uye musikana akanaka chaizvo kutaura naye. "Ndafarira chiitiko ichi kuNuru Studio." - Darren nezvaLucy, Brooklyn “Ichi ndicho chiitiko changu chekutanga naNuru kukwesha saka ndakanga ndisina chokwadi chekutarisira. Ini ndinowoneka pamuenzaniso waJulia uye ndakafunga kuti aive akanaka. Kwakanyanya kunaka kuva chokwadi kunyangwe. Nekudaro, muchokwadi, iye akanaka zvakanyanya! Izvo zvinogoneka sei? Kuda kwangu kwakafemedzeka, uye ndichadzoka kune zvimwe nekukurumidza sezvandinogona. ” - Sam anenge Julia, Manhattan “This is the best massage ever. Sasha ane hunhu hukuru, uye kwaive kunakidzwa chaiko kupfuudza nguva naye. Iye pasina mubvunzo inyanzvi zvakadaro. Nguva dzose inofadza uye inotapira. Ndinorumbidza uye zvirokwazvo ndichatsvaga rimwe dare munguva pfupi iri kutevera ”- Harry nezve Sasha, NYC“ Alice mukadzi anoshamisa uye ari nyore kutaura naye. Pakupera kwekusimbisa, ini ndaive nechokwadi chekuti ndaive kudenga. Anoshamisa emadzimai uye akanaka basa. Ndaizodzoka kumwe kukwiza muviri chero zuva. ” - Michael nezvaAlice, WA
“Basa rinoshamisa. Kungoita massage yeNuru naSasha, uye yaive yakanaka zvisingaite. Ndakazorodzwa mushure meizvozvo zvekuti ndakatadza kurangarira zita rangu. Kukwiza kwakanaka, kushambadza kunoshoreka, uye kuiswa kwekuraira: ndezvipi zvimwe zviripo kutarisana nazvo? ” - Ryan nezve Sasha, NYC "Lucy akadaro voluptuousness! Anoshamisa Nuru massage nyanzvi, uye murandakadzi akanaka chaiye wekutaura naye. "Ndafarira chiitiko ichi kuNuru Studio." - Darren munguva yese yaLucy, Brooklyn “Ichi ndicho chiitiko changu chekutanga nesipo yekushambadza yaNuru saka handina kuzopokana nezvandaitarisira. Ndakatarisa mumiriri waJulia ndikafunga kuti aive akanaka. Kwakanyanya kunaka kuva chokwadi kunyangwe. Nekudaro, muchokwadi, iye akatonyanya kunaka! Izvo zvinogoneka sei? Kutonga kwangu kwakapeputswa, uye ndichadzoka nekukurumidza sezvandinogona. ” - Sam nezvaJulia, Manhattan “This is the best massage ever. Sasha ane hunhu hukuru, uye zvaive mufaro wechokwadi kupedza nguva naye. Iye pasina mubvunzo inyanzvi zvakadaro. Nguva dzose inofadza uye inotapira. Zvakanyanya kukurudzira uye zvechokwadi bhuku imwe chikamu uchida "- Harry nezve Sasha, NYC" Alice is a stunning lady and comfortable to communication to. Panyaya yechirongwa, ndaive nechokwadi chekuti ndaive kudenga. Anoshamisa mukadzi uye akanaka kwazvo anowanikwa. Ndaizodzoka kumwe kukwiza muviri chero zuva. ” - Michael nezvaAlice, WA
Kutsvaga yakanakisa Nuru massage nzvimbo mu NYC? PaNuru Studio, iwe uchasangana nevakadzi vanoratidza vanogona kuronga musangano wakasarudzika wemassage iwe. Iwo masseuse akagadzirira kuchinjana uye kugadzirisa zvakajairika mameseji erotic kuitira kuti iwe uzadzise zvako zvegore. Kana chinguva chapera, iwe unobva wafunga kuti ndekupi kwekusvina mune inotevera mukarenda yako. Yedu inoshamisa Nuru slide massage Therapists vanoita zvavanogona kuita masaja inomutsa pfungwa dzako nekuzorodza muviri wako pamwe nemweya. Kubata nyoro, iwo mamiriro ekuzorora, uye zvinhu zviviri muchero wenyama kuita epidermic chiito. Iko hakuna kurovedzwa kwakafanana kune iyo iwe yauchazosvika Nuru Studio.
Muviri rub vs Nuru Massage
Nuru, tantra, kukwiza muviri, kukwiza erotic muNYC Julia 4 REVIEWS Hi! Ndini Julia, uye ndakagadzirira kukuita kuti unzwe uchifadzwa zvachose nechikamu cheNuru massage neni. Kugadzira masaja ndechimwe chezviitiko zvangu zvandinoda, uye ndinovandudza hunyanzvi hwangu mazuva ese. Ini ndinofarira kusangana nevanhu vatsva, uye ini ndinonyatso kuziva kuti ini ndiri ani uye maitiro ekugutsa zvese zvako zvakavanzika zvishuwo. Iwe unoda kuenda kune yakasarudzika rwendo neni uye uve shamwari yangu kwemaawa akati wandei? Ndino vimbisa kuti iwe uchafadzwa nechikamu neni. Bhuka izvozvi! Handigoni kumirira kukuona. Fonera izvozvi Wona Zvese Mepikicha Alice 4 REVIEWS Unoda kuyedza chimwe chinhu chinoshamisira uye kuzorora zvachose kwemaawa akati? Ipapo ini ndiri pano chete nekuda kwako. Ndiri Julia, uye ndanga ndichigadzira tantra massage muNew York City kwemakore. Ndakauya munzvimbo ino kwete nguva yadarika, uye ikozvino ndakagadzirira kuwirirana nevanhu vatsva, kunyanya nevarume vakangwara uye vane simba, senge iwe. Ini handisi masseuse ane hunyanzvi ndichiziva kugadzira nuru massage asiwo nyanzvi yekutamba ine makore eruzivo. Nekudaro, ini handina mubvunzo kuti iwe zvechokwadi uchazadzikiswa mushure memusangano neni! Fonera izvozvi Wona Mifananidzo Yese Lucy 4 REVIEWS Unoda here kushandisa mamwe maawa nemusikana akanaka akasvika kuNew York City achibva kune diki nyika yeEurope? Ipapo ini ndagadzirira kukuitira massage tantra. Ndini Lucy, uye ndakauya kuguta iri hombe kubva kuMoldova nguva shoma yapfuura, uye ikozvino ndiri kutsvaga chiitiko chitsva muNyC. Ini ndakagadzirira kukupa akasiyana masisitimu ekushambadza anosanganisira erotic massage. Ndinoedza kuwedzera hunyanzvi mazuva ese. Kuita kuti uwedzere kugutsikana, ndinogona kuva nehurukuro diki newe panguva yechikamu chedu kana uchida. Fonera izvozvi Wona Zvese Mifananidzo Sasha 4 REVIEWS Uri kufunga nezvekushandisa maawa akati manheru ano? Nekudaro, iwe unogona kuenda kumusangano wenuru massage muManhattan neni. Ndini Sasha, uye ndinoziva kugutsa zvese zvaunofungidzira. Ndinonakidzwa nekunakidzwa nevarume vakanaka uye vanoziva. Ndokusaka ini ndichivimbisa kuti panguva yekuita iwe unozonyatso zorora. Uye ndinoziva nzira zhinji dzekukwiza muviri. Ndosaka neni, iwe uchave uine chinonyanya kunakisa chikamu chekusimbisa chausingazombokanganwa. Unoda kuswedera padhuze neni? Ndakamirira iwe! Fona izvozvi Wona Mifananidzo Yese Valerie 4 REVIEWS Akanaka, akangwara uye ane hunyanzvi. Uye zvese nezve hunhu hwangu. Ndiri Valerie. Ndine makore makumi maviri nemashanu, uye ini ndatova neruzivo rwakawanda mumhando dzese dzekukwiza muviri. Maoko angu akapfava anonyatsoziva kugadzira nuru massage nekukwiza muviri. Kana iwe uchida kuedza chimwe chinhu chisina kujairika, ndichafara kukuona. Unonzwa kuneta uye kusurukirwa here? Nekudaro, ini ndichave ndakagadzirira kuita hurukuro newe. Kana isu tinogona kukwira mumhepo yehukama kwemaawa akati. Kana iwe uri muManhattan ikozvino kana kuti uchauya kuNew Yako munguva pfupi, saka ini ndakamirira kushanya kwako. Fonera izvozvi Wona Zvese Mifananidzo Alina 0 REVIEWS Ndiri pano kuzokubatsira kubvisa kushushikana, kusunungura kusagadzikana, uye kurarama kunze kwekungofungidzira neni !! Ini ndine ruzivo kwazvo, ndakanyanya kuongororwa, ndakavhurika pfungwa uye veeery inopisa musikana! Unoziva here chinonzi kugutsikana chaiko? Ndinofunga hongu, dai iwe wakandishanyira kare! Kana zvisiri-kungonditumira mameseji, uye nekuita musangano! Uye kana iwe uchiri kufunga nezve kukwiza muviri chikamu, usafunge- ingonditumira meseji! Kana iwe uchida kumbonakidzwa nhasi, kana iwe uine yakashata mamood, kana uine mamwe matambudziko-- RAMBA WAKadzikama UYE NDINYORERERE! Fonera izvozvi Wona Mifananidzo Yese Zarana 0 REVIEWS Kunaka kwekunze Zarana. Ndiri pano kuzokubatsira kubvisa kushushikana, kusunungura kusagadzikana, uye kurarama kunze kwekufungidzira kudiki neni !! Ini ndine ruzivo kwazvo, ndakaongororwa zvakanyanya, ndakavhurika pfungwa uye musikana anopisa kwazvo! Unoziva here chinonzi kugutsikana chaiko? Ndinofunga hongu, dai iwe wakandishanyira kare! Kana zvisiri - ingonditumira mameseji, uye bhuku rangu Nuru Massage New York maitiro echikamu! Uye kana iwe uchiri kufunga nezve kukwiza muviri chikamu, usafunge- ingonditumira meseji! Kana iwe uchida kumbonakidzwa nhasi, kana iwe uine yakashata mamood, kana uine mamwe matambudziko-- RAMBA WAKadzikama UYE NDINYORERERE! Fonera izvozvi Wona Zvese Mifananidzo Dana 0 REVIEWS Nditendere kuti ndipinde mupfungwa dzako nemumuviri nekuona musana wangu-kutetemera kwakasimba asi kuchizorodza kuputira muviri Yangu yekurapa, yekushungurudza kudzikisira maitiro inosimudzira pfungwa dzako. Ini zvechokwadi ndichasunungura mhasuru dzako, uyezve, tora ako ese makink uye kubvisa pfungwa dzako & muviri wezvinonetsa nekushushikana kwehupenyu hwezuva nezuva.
Ndivanaani vari Tantra Massage Vanopa
Tantra massage vanopa kusangano redu ndivo vakanyanya kunaka sezvo pasina zvakakwana vakadzidziswa Tantra masaizi vanopa paRubPage. Tantra massage yakasiyana zvakanyanya iyo yekugara uchirova erotic, uye vashoma chete vasikana vanodzidziswa zvakakwana izvi. PaMassage RubPage, isu tiri kubata nevanyanzvi vane hunyanzvi avo vanopfuura vakaperera uye vanogara vachitsvaga kufadza vatengi vavo. Saka, kana iwe uchida Tantric masaja, saka huyai kwatiri muvahaye izvozvi. Varume vazhinji vari kutsvaga kuhaya kubva kwatiri, saka iwe unofanirwa kukurumidza. Tinokuvimbisa kuti vasikana vedu vari kuzokutarisira pane zvaunoda uye vari kuzokufadza zvakanyanya. Sarudza yako Masseuse (Mamwe Masseuse Anowanikwa. Bata Nesu Kuti Uve Kuwanika kwanhasi) Melissa Noelle Sandrine Sofi Hapana mumwe wemasseuse edu asina kudzidziswa kana amateurs uye ndicho chikonzero nei takakurumbira. Ingo ita shuwa kuti iwe unotaurirana nesu uye pasina nguva, iwe unenge uine edu masseuse. Iwe zvakare wakasununguka kuhaya akawanda masseuse kubva kwatiri. Kunze kwekupa masseuse emhando yepamusoro, tinoita shuwa kuti vatengi vedu havasi kubhadhara zvakawandisa pamasevhisi. Nekudaro isu takachengeta mitengo yedu ine musoro. Kana iwe uchifarira mafaro eerotic, saka ingo uya kwatiri uye unakirwe nenguva yakanaka nemasekenzi anonakidza. Isu Tinopa Erootic Massage Seizvo zita rinoratidza kuti zvese ndezve kuwana erotic masaji iwe uchinakirwa nehutano mabhenefiti futi. Rudzi urwu rwekusimbisa ndicho chinhu chete chinogona kugutsa zvakakwana. Ongorora Kufara Kupedza Massage Kana iwe uchida kugutsikana kwakazara saka unofara kupera masaja ndicho chinhu chakanakira iwe. Huya kwatiri uye uwane zvakanakisa pasina kunetseka. Ongorora Tantra Massage Gadzirira kuti uone kushamisa kunoshamisa kwehupenyu hwako netantra massage. Tantra massage haizongokufadze iwe asi ichaita kuti unzwe wakasurukirwa zvinoshamisa zvakare Wongorora Vakaroora Massage Patinenge tichitaura nezve zvinhu zvisina kukodzera saka vaviri vekwamunhu masaja ndicho chinhu chete chaunofanira kusarudza paunenge uchida kunakidzwa nemumwe wako. Ongorora Asian Massage Asian masaja inongova yakanakisa uye kana iwe uchihaya maasia masseuse eaya masaji saka unogona kunakidzwa sekondi yega yega yechirongwa ichi. Ongorora NURU Massage NURU Massage ndeye zvese inotsvedza gel uye masikusi masikusi avo vari kuda kukupa iwe yakanakisa masaji chiitiko chehupenyu hwako. Ongorora Bhuku Nesu Zvino Taura Nesu Kana uri munhu, siya munda uyu usina chinhu. Name Email Phone Preffered Model -select-SandySayuaStephanieSunjungDaryaFoxyKateLalaEvaKseniaLiliannaMarikaIrinLolaMarkizaMaryanLesyaMartaNinaRosierMelissaNoelleSandrineSofi Alternative Model -select-SofiSandrineNoelleMelissaRosierNinaMartaLesyaMaryanMarkizaLolaIrinMarikaLiliannaKseniaEvaLalaKateFoxyDaryaSunjungStephanieSayuaSandy City Orlando Message Submit
Tantra Zvakaitika & Tantra Massage TANTRA ZVAKAITIKA UYE TERTRIC MASSAGE maminetsi makumi mapfumbamwe kusvika kuma90 Maitiro eTantric isumo yakanaka kuTantra, kwaunodzidza kupinda muChechi yeMweya Nzvimbo uye kugara ipapo kwenguva yehukama hwedu hwepanyama. Pakati payo iwe uchasangana nemhando dzakasiyana dzeTantric maitiro uye tsika dzinozokufadza chose apo ivo vanokutungamira iwe mune zvakanyanya kutarisisa, kunakidza, moyo-wakanangana, nzvimbo dzenyama dzinobatanidza muviri wako nemweya. Zviitiko zveTantric zvinogona "kurongedzwa" kana kuve "inoyerera nenguva" chiitiko uye nenzira yazvinoenda inoenderana nekubatanidzwa kwezvishuwo zvako uye kuyerera kwesimba redu munguva. Zvingave sei imwe nzira, kana chingave chiitiko chechokwadi cheTantric? Nekudaro, pane zviitiko zviviri zvinogona kuitika uye patinotaura tisati tasangana tinokurukura izvo zvinonyanya kukushandira. Chiitiko chakarongedzwa Chiitiko chakarongeka chingasanganisira zvinhu zvakadai sekutaura zvepedyo kuti tizivane, ruzivo rwekugezesa rweTantric, kupinda muRinoyera Mwoyo Space uye kugadzira mweya kubatanidza uyezve kutama kubva ipapo uchienda kune hunhu (uku wakabata nzvimbo inoera isina kusimba ) kuburikidza neruzivo rwekubata nyama, tanga ini newe uyezve newe neni. Izvi zvinogona kuteverwa neanoyera ehupenyu hunonakidza ruzivo, mauri wakapofumadzwa-wakapetwa, unounzwa muTantric kuziva, uye pfungwa dzako dzese dzakasimudzirwa zvine simba sekutungamira kupinda kuSexual Tantric Massage. Kuti uwane rumwe ruzivo, ndapota verenga yangu yakanamatira chinyorwa pane iyo Tsvene Yekushuva Kunakidzwa Chiitiko. Kazhinji kureba kwezvikamu izvi kuri pakati peawa nehafu uye chikamu chemaawa 3.5, iyo yakareba nguva yacho yakawanda nguva yekunakidzwa. Muchokwadi, iwe unogona kusanganisa iyo yakarongedzwa uye isina kurongeka mamiriro nekusimudzira iyo nguva yakatambanudzwa yechikamu. Chiitiko chisina kurongeka Chiitiko chisina kurongeka chichatanga zvakafanana nechikamu chakarongeka nekutaurirana kwandichaedza kutsvaga nzvimbo yekushaiwa, chishuwo kana chishuwo mauri kuti ini ndikwanise kuenda kune icho muchikamu. Tichaenda munzvimbo yeTantric pamwe nemumwe iyo inzvimbo ine simba, moyo wakabatana pamberi. Mushure mekusimbisa kubatana kwedu kwakadzika, chii chichaitika chichava nezvakawanda zvine chekuita nezvinouya mukukurukurirana kwedu kwekutanga. Kazhinji, ini ndinogona kukudzidzisa maitiro ekubata Tantrically uye nekukutungamira iwe munzira yekutevera simba remukadzi uye isu tobatana-kugadzira kuyerera kwekutevera, kutungamira, uye kubatanidza simba. Tantric Massage - Imwe Hora Iyo Tantric Massage haisi yakajairika kukwiza muviri. Zvinosanganisira iwe kudzidza kudzikisira kuburikidza nekudzidza zvinotevera: Iko kufema kweTantric Kubatanidza bonde rako, moyo nemweya Chiyero chekumutsa icho chinokugonesa kudzikira. Chii chaunofanira kuita panhongonya yemufaro wako kuitira kuti ugozadza simba rako rehupenyu pabonde mumuviri wako wese, uchiwedzera mukana wekuti uve neruzivo rwemuviri. Zvese izvi zviri kuwedzera kune inonakidza kwazvo, nyama yekukwiza muviri iyo zvese zvinokuzorodza uye zvinokukurudzira. Tantra Chiitiko uye Tantric Massage - Imwe neHafu Maawa Iyo Tantra Chiitiko uye Tantric Massage combo inokupa iwe chaiyo yekutanga kuTantra. Kana iyo Tantric Massage ikasanganiswa neTantra Zvakaitika iyo ine simba rese kune izvo zvinoenda pamberi payo. Paunosvika, ndinokuchinjisa kuita sarong yandinokupa. Isu tinotaura kwechinguva chidiki kuti tibatanidze simba redu uye tive vanhu chaivo kune mumwe nemumwe. Ipapo isu tinopinda mune iyo Inoyera Mwoyo Space, inova nzvimbo yeinesimba moyo-yakabatana kuvapo, uye kuita mweya kubatana. Tichibata nzvimbo iyoyo takasimba, tinobva ipapo tichienda kune yepanyama kuburikidza neruzivo rwekubata nyama, tanga ini newe uyezve iwe neni. Kubva ipapo tinopinda mune yekudaidzira Tantric massage. Ichave iri yakapfuma uye yakarebesa, awa nehafu izvo iwe zvauchazove nazvo muhupenyu hwako-nguva - uye ini ndinogona kutaura zvakawanda zveawa iyo Tantric Massage. Tantra Chiitiko uye Tantric Massage - maawa maviri Zvino, rega ndiwedzere zvinoitika mumaawa maviri echiitiko. Isu tinoenda mune imwe yenzira mbiri, sarudzo yako. Sarudzo 1. Iyo Tsvene Yekunakidzwa Kunakidzwa Chiitiko. Ndisati ndakupa iko kukwiza muviri, ini ndakakusunga kumeso uye ndikakutungamira munzvimbo yekunyarara, yakatarisa kuvepo kweTantric. Ipapo ini ndinodzikamisa pfungwa dzako munzira dzinoverengeka uye dzinokwezva - pfungwa yako yekunhuwidza, kuravira, kunzwa, kinesthetic / kunzwa pfungwa. Sarudzo 2. Kunakidza Tantric Kubata Ini ndakakudzidzisa maitiro ekubata zvine hunhu kubva kunzvimbo ine simba, ine moyo-yakabatana kuvapo. Zvino ini ndichakudzidzisa manzwiro ekunzwa simba mumaoko ako uye nekubata nenzira dzinounza mukadzi muviri wese uri mupenyu. Iwe zvakare unodzidza maitiro ekubata munzira inotora. Paunobata uchitora nzira, unozvipa kunakirwa kuburikidza nekubata kwako. Iwe unozodzidza maitiro ekuzviita izvo nenzira inowedzera kunakidzwa kweumwe wako. Tantra Chiitiko uye Tantra Massage - 2.5 maawa Kana iwe uchida zvese Dzvene Nyama Yekunakidzwa Chiitiko uye kudzidza nekudzidzira Tantalizing Tantric Touch, ipapo iwe une iyo 2.5 maawa musangano. Iwe zvakare ungasarudza iyo 2.5 maawa musangano, kana iwe uchida kushandisa iyo yakawedzerwa nguva mukuenderera mberi kukudziridza kugona kwako kwekunakidza kufadza mukadzi nekumumutsa kuburikidza nekubata kwako uye kuvepo kwemoyo. Izvo zvinoita kuita maawa akati wandei paTantric Kubata uye Kufadza iye Mwarikadzi. Iyo yakareba iyo nguva yatinayo ipapo ndipo paunowedzera kudzidza uye nekuwedzera kushamwaridzana chikamu chichava. Iko kunogara kune iyo Tantra Mastery Session paKufadza Mwarikadzi, kana iwe uchida kuenda zvakadzama munzvimbo ino. Tantra Chiitiko uye Tantric Massage - maawa matatu zvichikwira Kana iwe uchida zvese sarudzo 3 uye 1 asi iwe uchida kuenda zvakadzama mune sarudzo 2 ipapo unenge uchiita iyo 2 kana 3 awa chikamu.
Kuverenga Kwezwi: 1433
Anofara Kupedza Massage BDSM BODY RUB
Erotic massage - iwe nemushandi wepabonde hauna kupfeka uye vanokwiza muviri wako wese kusanganisira nhengo dzako dzakavandika nemaoko avo Kukwiza muviri - izvi zvakafanana nekukwiza erotic massage Muviri unotsvedza - kazhinji chikamu chebasa rekukwiza erotic. Kana mutengi akashama, akatarisa pasi, mushandi wepabonde anozotsvedza miviri yavo isina kupfeka pamwe nemutumbi wemutengi. Inogona zvakare kuisa mutengi achivharwa kumeso kuti awedzere kunakidzwa kwekunzwa. Inogona zvakare kusanganisa basa remaoko, chiFrench uye kana izere sevhisheni Fungidziro - inogona kusanganisira mushandi wepabonde kupfeka mune imwe nguwo kana yunifomu (kureva. Mukoti / musikana wechikoro / mauto aneta / mbatya dzemitambo) uye / kana mutambo-wenyaya Role-play - zvinoitika muchirongwa chekufungidzira apo mutengi uye mushandi wepabonde vanobvumirana pane imwe nhanho uye vachitamba rimwe basa kureva. mutengi ndiye mukuru wechikoro uye anoita zvebonde musikana asina hunhu wechikoro uye anorohwa paanowana mhinduro zvisirizvo mukirasi B / D kana Bondage uye Discipline - zvinosanganisira kurohwa, kurohwa, kurohwa, caned, kusungwa, kuudzwa zvekuita kana uchidzorwa Vazhinji vanoita zvebonde vakadzidziswa vanopa masevhisi aya vanozivikanwa seProfessional Mistresses kana Masters. Kune zvakare akakosha brothels akangogadzirirwa amhando dzerudzi urwu nemidziyo yakasarudzika inodikanwa kureva. tambo, zvikwapuro, kumeso kumeso, manoko (mahandcuffs), tsvimbo, zvirimwa, kumisa maraki, maA-mafuremu nezvimwe. Aya masevhisi dzimwe nguva ndeemhando yebonde uye dzimwe nguva haasi S / M kana Sadism neMasochism - fomu yakanyanyisa yeB / D . Zvinogona kusanganisira kuboora kwepamusoro, kucheka, kukanganiswa zvakanyanya kwekunzwa, kunyadziswa, zviitiko zvekurapa nezvimwe. Vazhinji vanoita zvebonde vakadzidziswa vanopa masevhisi aya vanozivikanwa seProfessional Mistresses kana Masters. Kune zvakare akakosha brothels akangogadzirirwa aya marudzi emasevhisi nezvose zvakasarudzika zvishandiso zvinodiwa kureva. tambo, zvikwapuro, tsvimbo, zvirimwa, maseketi anomiswa, maA-mafuremu, zvekurapa, zvekuboora nezvimwe. Aya masevhisi dzimwe nguva ndeemhando yebonde uye dzimwe nguva kwete. Ongorora: BDSM inowanzo shandiswa musiyano kutsanangura iyo B / D uye S / M chiitiko chakazara. Akanaka, Anotaura, Vakadzi veAmerica vachipa Titillating Erotic Muviri Rub Chiitiko Relaxation, Roleplay & BDSM Nguva dzose isina mwero yakashongedzwa & kupfeka, tinokuvaraidza nehurukuro yedu & hunyanzvi hwekunyengera. Tichakusvitsa pamabvi ako & tishandise mashiripiti edu kwauri. Hutano hwedu, ruzivo rwechienzi, ungwaru, uye runako ndezvimwe zvezvinhu zvedu zvikuru kwazvo - asi kugona kwedu kukupa iwe kunakidzwa kusingaenzaniswi kwakachengeteka uko kune varume vanouya kuzowana zvimwe.
Maitiro ekubhukisa Akashama Massage?
Bodywork Sessions neSue Kune chero munhu asati ave kuenda kumusangano neasina kudzidzisa nezvebonde mudzidzisi, wehukama murairidzi kana wemuviri zvinoita kuti zvive zvakaoma kufungidzira kuti zvichange zvakaita sei. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti muviri wemuviri haufanire kureva kubata muviri. Sue inoratidza mutengi iko kune iyo clitoral shaft iri pane anatomically chaiyo vulva cushion Iyi mifananidzo yeSue mune dzakasiyana zviitiko ndeyekukupa iwe pfungwa yekuti chingaite sei chikamu. Wese mutengi akasiyana. Vamwe vanoshuvira kubatwa, vamwe vanogona kunge vachitya nazvo uye nekudaro, chikamu chega chega chakasiyana. Zvirongwa zvinowanzo sanganisira huwandu hune hutano hwekutaura, kupupura, kuratidza uye kunakidza. Zvimwe zvikamu zvinosanganisira kusabata zvine chekuita nemuviri zvachose. Zvepabonde Dzidzo zvikamu zvinogona kuve zvipfeko, uchishandisa anatomically gadziriso yemadzvinyu uye majongwe akapfava. Mutengi akatungamira kubata. Sue inobata vatengi ruoko uye rumwe ruoko ruchibata nhengo dzepanyama Bodywork Zvirongwa zvemuviri zvinogona kupfeka zvakakwana, zvakapfekedzwa zvishoma kana kupfeka. Uyezve, vatengi vanogamuchirwa kupfeka kana kubvisa mbatya muchikamu chose. Chikamu chakakosha kwazvo chemuviri ndechekuti inotungamirwa nemutengi. Kubata kwese kunofanirwa kukumbirwa nemutengi. Zvebonde uye anal inobata kubata Sue anogara achipfeka magurovhosi. Mutengi anosarudza kana magirovhosi akapfekedzwa kune chero imwe mhando yekubata.
Kutanga 2019 nekuzvibata iwe kune imwe inonaka bodywork. Joinha Bo, ane ruzivo mutungamiri uye ane chipo kupa wemuviri, uye vamwe vanofarira erootic bodywork sezvavanopa, kugashira, uye ruzivo rwekuzorora, kushuva, eroticism, hukama hwehama, uye kunyange akachinja nyika kuburikidza nemashiripiti e bodywork. Ichi chikamu chichaitwa Mugovera, Ndira 5 th, 2019 kubva na5 pm - 8:00 pm kuTodd Pilates & Barre Studio North.
Kupfuura makore ekudzidzira mune zvese zvetsika Hatha uye Vinyasa yoga, Yoga Therapy, Neo-Tantra, eroottinen uye nyama yemuviri, kudzidziswa bonde uye kudzidzisa zvebonde, ini ndakagadzira huzivi hwakakomberedza kushushikana kwepfungwa kunokonzerwa nekuratidzira chisina kukwana mufananidzo wedu nyika. Ichi chifananidzo chinowanzovanza hunhu hwedu hwechokwadi hwepabonde uye pamweya pasi pezvikamu zvemasikisi emagariro, mhosva uye kunyadziswa, zvichideredza kugona kwedu kuwana RUSUNUNGUKO, RUSununguko , muviri, moyo nemweya. Yakashama Yoga Therapy inobvumidza iwe kuti uonekwe uye upupurirwe pasina kutonga, rusununguko kuva chero wauri mune chero ipi nguva, kugamuchirwa chaizvo sezvauri uye kukurudzirwa kuita zvine musoro uye zvinokanganisa shanduko kubvumidza kune rwakawandisa rusununguko, kuzvida rudo, hunhu uye hukuru mukati hupenyu.
Urban inotonhorera nemafungire Ekumhanyisa-inoteerera kumhanyisa kure nemwenje iyo Aerox Yakashama inofambiswa neyemahara-inotenderera emvura-yakatonhorera 50cc 2-sitiroko injini. Yayo aerodynamic R-yakateerana yakafemerwa bodywork ndeye chaiyo yekutora yekubata. Uye ine chassis isina kuremara, 13-inch alloy mavhiri, 190mm disc mabhureki uye kumeso-chiito kusimisa, yakavakirwa chiito chakakomba. Aerox Yakashama: kunakidzwa kwakachena uye rusununguko.
Ndakaita LOT yemarapirwo akasiyana muhupenyu hwangu uye ndiri munhu anozviti ndeangu bodywork junkie. Iwe unoziva matauriro anoita vanhu "Ungaitei dai mari yanga isiri nyaya?" Mhinduro yangu yagara iri: chinhu chimwe chete chandiri kuita izvozvi asi ndinowana vanochengeta dzimba kakawanda pasvondo, ndaibhururuka kekutanga kirasi, uye ndaitora muviri wemuviri vhiki rega rega, kwete pamwedzi. Hazvina kutaurirana kwandiri.
Nekudaro, yekuchinjika V12-engined chassis, isina zvachose bodywork, yakaratidzirwa ku1965 Turin mota show, uko vatengi vaifarira vakaisa maodha kunyangwe iyo inoshamisa bodywork yakanga yavezwa. Mota yakapedziswa yakazopangidzwa kuratidzwa ku1966 Geneva mota show, uko vanobhejera avo vaifungidzira runako rweMiura vaizodarika ganda-rakadzika vaigona kunge vaifarira.
UK London Yakanakisa Muviri kukwiza Vanopa
KUDZOKORORA Mvura yeLondon Bhuku 1: Basa reMuviri Mutambo unotengeswa kwazvo wezvinhu zvekufungidzira zvinouya kumakomiki, nemunyori Ben Aaronovitch achibatana pamwe nemunyori Andrew Cartmel uye muimbi Lee Sullivan Rivers weLondon, yakanyanya-kutengeswa nhevedzano yezvinhu zvinonakidza zvinonakidza zvinouya. kune Titan Comics. Ipo munyori Ben Aaronovitch achiisa mabatiro ekupedzisa kunoverengera inotevera munhevedzano, Hanging Tree, akabatana pamwe nemunyori Andrew Cartmel (aimbove mupepeti waAaronovitch pane Sylvester McCoy's Dr Ndiani muma80s) kwemamwe ma comic kuunganidza kuzadza mukaha. Kutanga kumusoro ndiko Kushanda Kwemuviri. Wedu protagonist ndiPeter Grant (funga nezvaLuther pakutanga pabasa rake), uyo anoshandira Met Metriki chikamu chemashiripiti. Ndiye munyori wedu mumanoveli, maziso edu nenzeve. Sezvaanodzidza kuti maMeti anouya sei nekuva nemashiripiti uye nei, nesuwo. Uye apo Grant paanoenderera nebasa rake remapurisa anowana zvimwe zvinoshandiswa zvemashiripiti ake. Svikiro remakomiki, echokwadi, anoonekwa zvakanyanya kupfuura prose, zvinoreva kuti pane zvishoma zvinodikanwa kune tsananguro dzakadzama. Zvakadaro, izvo zviripo zvinobata izwi raPeter Grant zvakanaka. Asi uko ma comics anorasikirwa nemazwi avanowana mumifananidzo, nehumwe hunyanzvi hwakajeka hunyanzvi kubva kuna Lee Sullivan. Ingo apo neapo zvishoma pane zvishoma, izvo zvinosuwisa kusiya colourist Luis Guerrero achizadza mamwe marondedzero, uye apa ine tsika yekuwana inorema-ruoko dzimwe nguva. Dambudziko hombe Sullivan ane, hongu, arikuita Peter Grant uye cast revatambi muvanhu chaivo. Mushure mekugadzira mifananidzo mundangariro medu, pachagara paine kusawirirana kana mavara aya achionekwa mune inoonekwa svikiro. Vaverengi vemabhuku vachave nemafungiro avo pamusoro pekuti vatambi vanofanira kutarisa uye kupfeka sei, uye Sullivan anofanira kutarisira izvi zvinotarisirwa. Hunhu hwaBeverly Brook, semuenzaniso, anoshandisa nguva yakati rebei mumanovel ari mumvura uye, zvakanaka, asina kupfeka, asi achifungidzirwa kupihwa wetsuit yemakomiki! Kune vaverengi vanoziva akateedzana, iyo chaiyo nyaya - kuferefetwa kwedzimba mota - ndeyekudikanwa zvishoma nezvishoma pane inoverengeka, asi vateveri zvirokwazvo havazonyadziswe Kune vaverengi vatsva, zvakadaro, uku hakusi kusvetuka kwakanakisa pane poindi Tsvaga iyo yekutanga Rivers yeLondon novel, uye wozodzoka - iwe unozozvitenda iwe pachako! Chekupedzisira zvakakosha kuti uzive kuti nepo paine inonakidza-peji shanu-bhonasi mabara akasarudzika kune akaunganidzwa vhezheni, yakawanda yepashure prose zvinhu kubva kune epakutanga ma comics zvinosuruvarisa kuti haipo. Yakabatana
Bakers Body Shop muLondon, KY, inopa yakakwana auto kugadzirisa muviri kusanganisira yemhando auto auto basa, kupenda, kugadzirisana kwekukonana, uye auto kuvaka. Tiine ruzivo rwakabatanidzwa rweanopfuura makore zana, isu tinoshanda mune ZVESE auto kudhumhana kugadzirisa uye isu tinoshanda neVOSE makambani einishuwarenzi. Bakers Body Shop ine mukurumbira wakasimba nevatengi vakagutsikana muLaurel nemataundi akapoterera. Ndokumbira kuti uone yedu Nezvedu peji kune yakasarudzika runyorwa rwevatengi. Ndatenda nekushanyira saiti yedu.
Zvino, hunyanzvi hweBritish, ndadzoka. Titan Comics andiwana izvozvi. Ben Aaronovitch anyora yekutanga mune ye-intra-book comic nhevedzano inonzi Rivers yeLondon, chikamu chake Peter Grant nyaya nezve iro bazi remapurisa eMetropolitan anoita zvemashiripiti. Icho chiBritish, yakakodzera London comic uye inoshamisa. Inogona sei chero nyaya kutadza kupinda apo ivo vekutanga (vapenyu) mavara ari mwarikadzi murwizi akapfeka wetsu yepepuru; DC Guleed mune hijab, mukuru wake DI Stephanopoulos, ngochani lesbian mune yakanaka-yakanaka frock jasi; uye chap yatakamirira tese, DC Peter Grant (mune sutu nhema nhema). Iye mupurisa wejunior kubva kuFolly, iyo unit iyo inoita izvo 'zvisina kujairika zvinhu' zveMasimba, zvinoreva kuti anoita zvemashiripiti. Nzizi dzeLondon dzakanyorwa-pamwe naAndrew Cartmel, yakadhirowewa zvakanaka naLee Sullivan, uye yakapedziswa naLuis Guerrero naRona Simpson. Kuti umhanye kukurumidza pane iyo nyaya, verenga ongororo yangu yemabhuku mashanu ekutanga aAaronovitch's Peter Grant akateedzana pano, uye dzoka kana wagadzirira.
Eotic Massage Zvinyorwa
Erotic massage inogona kushandiswa mukurapa pabonde senzira yekumutsidzira iyo libido kana kuwedzera kugona kwemunhu kuti apindure zvine hungwaru pakukurudzira kwenyama. Mharidzo kubva kuna Joseph Kramer, Ph.D. Mune imwe tsaona, kukwiza erotic kunogona kuve chimiro chekuratidzira pasina rusununguko rwepabonde, inoitirwa kukwidziridza kunzwisisika kweiyo chaiyo pamberi pechimwe chibvumirano panomutswa nekuzadzikiswa pabonde. Massage yange ichishandiswa muhurukuro yekurapa kwenguva yakareba kwazvo, uye kukosha kwayo kwezvinangwa zvekukwezva kune zvakare nhoroondo refu. Tarisa uone OrgasmicYoga.com. Mukuru wemapurisa anogadzirisa kupinda kwe assert kwakaitwa kuCrown Spa, amatory massage locutory. Iyo inotapira vanilla kunhuwirira inogadzira kunhuwirira kukuru uye kunonaka. 24 chiitiko. Incels - kana vasingazvibati vekusaroora - vanozivikanwa kusimudzira misogynous ideology, kazhinji kuburikidza nepamhepo embassage mabhodhi. Erotic masaja zvinoitika kana uchidzidzira nemumwe wako. Akanzi akaita kunge akafa panzvimbo iyi. Zvinotora mafomu mazhinji, kubva pamasaji ekushambadza anovavarira kubatanidza zvepabonde, zvemweya uye zvepanyama, kukwiza zvine chinangwa ndiko kuzadzikisa kwechirume kuburikidza nekubata ruoko, kuita bonde nemumukanwa, kana kusangana pabonde.
Bodyrub Dhairekitori reSualual Massage
Masseuse ekuzora muviri
Deredza kushushikana nekuzorora uye kumutsidzira hutano kirabhu kusangana kubva kuNew York's Gay Bodyrub. Kune shampoo inosangana kana kutodarika yako isingatarisike, usatarise kumberi pane ino spa. Kuti ive nechokwadi chekuwanika kwevashandi vayo, iyi spa inokumbira vatengi vayo kuti vagovere mamisheni pamberi. Pamutengo unodhura, unogona kuzvimomotera uye nekugamuchira yakakwira-inoburitsa spa kubatsirwa kubva kuGay Bodyrub. Kubhadhara neyakakura kiredhiti kadhi inotsvedza uye inyore kune vatengi veGay Bodyrub. Garaji kupaka iri padyo padyo, asi vatyairi vakagamuchirwa kutsvaga nzvimbo mumugwagwa. Kana iwe uine kupera kwevhiki, Gay Bodyrub inzvimbo huru yekuenda kuzorora uye kurerutsa muviri wako nepfungwa.
Kubva Kune Editors Ederedza kudzikisira neanozorora uye anomutsidzira nzvimbo yekutandarira kubva kuNew York's Gay Bodyrub. Zvemasaji inosangana kana kutodarika zvaunoda, usatarise kupfuura iyi spa. Kuita betroth kuwanikwa kwevashandi vayo, iyi spa inokumbira vatengi vayo kuti vagonese maappointin pamberi Pamutengo unodhura, unogona kuzvipurudzira uye nekugamuchira yepamusoro-kumagumo spa kubatsirwa kubva kuGay Bodyrub. Kubhadhara nemakadhi makuru echikwereti kuri nyore uye kuri nyore kune vatengi veGay Bodyrub. Garaji kupaka yakaiswa padhuze, kunyange vatyairi vakagamuchirwa kutsvaga nzvimbo mumugwagwa. Kana iwe uine kupera kwevhiki, Gay Bodyrub inzvimbo yakanaka yekuenda reel uye kuzorora muviri wako nepfungwa. Tora Mafambiro
Kubva Kubva Editors Ederedza kushushikana neyakaregedza uye yekumutsidzira spa chiitiko kubva kuNew York's Gay Bodyrub. Zvemasaji inosangana kana kutokunda zvaunoda, usatarise kupfuura iyi spa. Kuti ive nechokwadi chekuwanika kwevashandi vayo, iyi spa inokumbira vatengi vayo kuti vagovere mamisheni pamberi. Pamutengo unodhura, unogona kuzvifadza uye nekugamuchira yakanaka-yekupedzisira spa masevhisi kubva kuGay Bodyrub. Kubhadhara nemakadhi makuru ekutenda kuri nyore uye kuri nyore kune vatengi veGay Bodyrub. Garaji kupaka iri padyo, kunyange vatyairi vakagamuchirwa kunovhima nzvimbo mumugwagwa. Kana iwe uine kupera kwevhiki, Gay Bodyrub inzvimbo huru yekuenda kuzorora uye kuzorora muviri wako uye ushingi.
Unganidza shamwari dzako dzechisikana uye shandisa Nguva ku spa. Kana iwe uchinetseka kuti ndeipi kirabhu yehutano yekushanyira, usatarise kumberi pane yakanyanya-kutsiura Gay Bodyrub muNew York, NY. Uku kukwizwa kwespa kunogona kubatsira kudzikisira kushushikana kwemazuva ese uye kugadzirisa mamiriro.
Bodyrub muNew York Kutsvaga kwako kwapera. Ziva iyo yakanakisa amatory massage muMidtown East, Manhattan. Tsanangura kuzorora kwako. Gamuchira zvido zvako. Bhuka iyo chikamu cheako akapika. Tinoshanda nesimba nekuti unokodzera. Funga nezve chimiro chedu chakanaka kuti tikubatsire kusvika kune yako Inofara Nzvimbo. Isu tinoziva chaizvo zvaunoda uye isu hatityi kuendesa. Huya uzvionere wega! Iyo Session inogona kuve isina hanya yakanangana nezvose zvaunoda. Isu tinobatanidza erotic huwandu rub, nuru massage, kunakidzwa kweshawa, fetish kurovedza muviri, uye kujairira kushambidzika. Isu kudanana kunoshanda nevaroorani! Uya nemunhu wako waunofarira kuti aedze uye asangane neako sub-kuziva imwe pane imwe! Zvinofadza zvikuru kuona kuchinja kunoita vanhu. Nhasi unogona kunge uri mumwe akarasika mutorwa muNew York ane kuzvimba kwakazara nematambudziko. Mumwedzi tinogona kuona maziso ako akajeka uye tinzwe nyaya dzako dzebudiriro dzinodedera! Isu tinoziva chakavanzika chemufaro wechokwadi - ita izvo zvaunoda uye ufare chete nekuti! Vatengi vedu venguva dzose vakangoita sewe .. vasina chokwadi nevasingazivi. Vakatipa mukana uye ikozvino isu tiri shamwari dzinogovana zvakavanzika, kusimudzirana uye kuchinjana zvinwiwa zvepabonde nema endorphins. Dzvanya kuti uone gallery yevatambi vedu TIPEI SHOKO KUTI Ndingaite sei bhuku rematory kuNew York? Zviri nyore kwazvo! Tipei runhare kana titumirei theme. Pamwe isu tichakwanisa kukugarisa iwe nekukurumidza kupfuura iwe zvaunofunga! Ndeupi musiyano uripo pakati peNuRu massage uye Muviri kwiza New York manyorerwo? Isu tinopa akati wandei marudzi emitezo yekurapa. Nuru kukwiza kunoitwa pamubhedha wakasarudzika nemhepo inodziya Nuru gel. Chaizvoizvo iwo muviri kune muviri kukwiza muviri, apo erotic muviri kukwiza chikamu kunosanganisa ekurapa bodywork zvinhu zvine erotic kurova, kunoitwa nemaoko. Wakagadzwa kupi? Tiri kuMidtown East (Manhattan, New York). Zviri pamutemo here? Hongu! Isu tinozviona sevaraidzi kupfuura vanopa masaja ekurapa. Kana iwe uchitsvaga imwe yekurapa, shampoo yekurapa kune yako chaiyo nhamo tinokurudzira kubata chiropractor. Ndino gadzirira sei musangano? Usatsamwe. Paunoshanyira studio yedu tine zvese zvaunoda. Iwe unogona zvakare kugeza pamberi uye mushure memusangano. Nuru masaja inoda kubatwa nekutya kushambidza sezvo yakakosha gungwa rejecha riri kushandiswa. EROTIC MASSAGE INITSVA YORK. NOKUDZIDZWA